Fijerin'ny CREM ny raharaham-pirenena
Publié 4 juin 2015 11 novembre 2015 rado
Manoloana ny :
Savorovoro politika ankehitriny manodidina ny resaka eo amin’ireo tsy fanarahan-dalana eto amin’ny tany sy ny firenena.
izay mety ho fanapahan-kevitry ny HCC, ny CREM dia mahatsapa fa mandry tsy lavoloha sy miha mahantra ny vahoaka malagasy. Raha izao no mitohy dia hisy kirizy sosialy sy ekonomika goavana indray eto amitsika.
Noho izany, manao izao fanambarana manaraka izao izahay :
Voalohany: volam-bahoaka no hanakaramana ny mpitondra isan’ambaratongany, volam-bahoaka no hanakaramana ireo miaramila sarotiny amin’ny tanindrazana sy lalàna, volam-bahoaka no hanakaramana ireo miaramila lazaina fa miaro ny vahoaka sy ny fananany.
Faharoa: Miantso manokana ny miaramila tsy homba ny atsy na ny aroa
Miantso azy ireo handray ny andraikitra tandrify azy marina izahay noho izany, mba hisorohana ny korontana, fandrobana, sy ny valifaty ary faty olona sy rà mandriaka indray.
Fahatelo: Raha sanantria hisy ny korontana dia mangataka ny miaramila hitandro tanteraka ny filaminana sy hanery ny fifampidinihan’ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka hanangana fitondrana vonjimaika mba hiverenan’ny “ordreconstitutionnel” ao anatin’ny fotoana fohy. Koa amin’izany:
Fahefatra: Ny filoha voafidim-bahoaka ihany no miverina eo amin’ny toerany,
Ny solombavambahoaka dia manao ny asa tandrify azy andavanandro.
Fahadimy: Ny dinika hatao rehetra dia mifantoka amin’ny fananganana governemanta teknisianina vaovao ka tsy mihoatra ny 15 ny membre ao anatiny mba hivoahana tanteraka amin’izao krizy izao
Faha enina: Tsy tokony hihemotra ny fifidianana efa nomanina.
Fahafito: Hafainganina ny fananganana sy fametrahana ireo andrim-panjakana rehetra voalazan’ny lalam-panorenana mbola tsy mipetraka
Natao teto Antananarivo izao fanambarana izao anio 4 jiona 2015
Ny mpitantsoratra an-kapobeny
RATOBISAONA Rado A.
⟵Relance économique dans la LF 2014
Madagascar: L’espoir de lendemains meilleurs s’éloigne!!!⟶